Maxay yihiin duufaanta duufaanka ee maxey tahay sababta aan uga walwalsanahay? | Saadaasha Shabakadda
Weligaa ma maqashay duufaan xoog leh? Iyagu waa ifafaale ilaa hadda aad u yar oo la yaqaan, laakiin in kastoo ay waxyeello daran u geysan karto aagagga xeebta. Waxaa sababa khalkhalka saadaasha hawada oo isku darsama cadaadis hoose iyo dabaylo, oo ay sababaan dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic, oo sababa kor u kaca heerka badda.
Waa dhacdo aad u khatar badan, maadaama ay sababi karaan dhimasho ka badan dhul gariirka. Dhab ahaan, ayaa sabab u ah 90% dhimashooyinka ay ka tagto duufaanta.
Sawir - Pierre cb
Waxaa jira dhowr geedi socod oo kaqeybgalaya isbeddelka hirarka: cadaadiska jawiga, dabaysha, hirarka, roobka iyo wareegga dhulka. Cadaadiska duufaanta waxay keentaa in heerka biyuhu sare ugu kaco gobolada cadaadiska hooseeya iyo inuu yareeyo gobolada cadaadiska sareeyo. Tan waa in lagu daraa meelahaas ay biyuhu qotodheer yihiin mawjadaha ayaa ka sareyn doona oo ka xoog badnaan doona.
Tani lafteeda waa dhibaato, laakiin sida lagu sheegay daraasad ay sameeyeen Xarunta Wadajirka ah ee Cilmi-baarista ee Guddiga Yurub (JRC, oo loo soo gaabiyay Ingiriis: Xarunta Cilmi Baarista Wadajirka ah), marka la gaaro 2100 Yurub gudaheeda waa in aan u diyaar garowno, maadaama ay kordhin karaan ilaa 15%.
Cimilada sii kululaaneysa waxay umuuqataa inay gadaal kajirto, maadaama heerka badda uu sii kici doono, waxaana jiri doona duufaanno sii kordhaya Marka waxay noqon doontaa lagama maarmaan qaado tallaabooyin lagu ilaalinayo aagagga xeebta, gaar ahaan kuwa Badda Woqooyi iyo kuwa Baltic Sea, maadaama haddii kale cawaaqib xumadu ay sababi karto dhimasho.
Duufaanta duufaanku waa dhacdo aan u baahannahay inaan fiiro gaar ah u yeelano, maadaama aysan kaliya saameyn ku yeelan dalalka leh cimilada kulaylaha, halkaas oo duufaannadu ay ku badan yihiin, laakiin goor dhow ama goor dambe saameyn ku yeelan doono qaybaha kale ee adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maxay yihiin duufaanta duufaanka ee maxey tahay sababta aan uga walwalsanahay?
NASA: 2016 waxay noqon doontaa tii ugu kululayd taariikhda